जसलाई आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाए – Paluwa Khabar
भाद्र ३०, २०७८ बुधबार 44
हेटौंडा : मकवानपुरको एक गाउँपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरी, जसले दुई साताअघि एक छोरालाई जन्म दिइन्। जन्मिने बित्तिकै छोराको चि’च्याह’टले उनलाई उनको भविष्य देखाएको थियो।
सन्तान ज’न्मिएपछि हरेक बाबु आमाले उनीहरुसँग जोडेर आफ्नो भविष्य देख्छन्। तर उनले देखेको भविष्य र चि’न्ता सामान्य मानिसको भन्दा धेरै फरक थियो। किनकी उनी एक अविवाहित किशोरी आमा बनेकी थिइन्। अझ त्यसमा पनि उनले जन्माएको बच्चाको बुवा आफ्नै दिदीको श्रीमान थिए।
जो बच्चा ज’न्मनुअघि नै जे’लको पर्खालभित्र कै’द हुन पुगिसकेका थिए। निम्न आयस्तर भएको परिवारमा हुर्किएकी उनले कक्षा ५ सम्म मात्रै अध्ययन गरेकी छन्। घरको कामकाजमा आमालाई स’घाउनु पर्ने भएपछि उनले पढाई नै छोडेको थिइन्। पढाई छोडेर मेलापातमा जाने गरेकी उनले अन्जा’नमा नै ठुलो बुवाको छोरी अर्थात् उनको दिदीको श्रीमानसँग यौ’न स’म्बन्ध राख्न पुगिन्।
त्यतिबेला उनलाई यो सम्बन्धले उनको जीवनको बाटो कतातिर पुग्छ भन्ने थाहा थिएन। सुरु सुरुमा त उनले भिनाजुलाई बे’वास्ता नगरेकी पनि होइनन्। तर अल्लारे उमेरमा रहेकी उनी आफ्नो भिनाजुको माया जा’लमा परिन्। उनको र भिनाजुको सम्बन्ध त्यतिबेला मात्रै बाहिर आयो जतिबेला उनको पेटमा रहेको बच्चा सबैले बाहिरैबाट प्रस्ट देख्न सक्थे।
विवाह र आमा बन्ने उमेर नपुगेकी उनी भिनाजुको सन्तानको आमा बन्न लागेको थाहा पाएपछि गा’उँभरी चर्चा भयो। ‘गाउँलेले यति सानै उमेरमा आमा बन्न ला’गेको रहिछिन्। यो त ठिक होइन , प्रहरीकोमा गएर मु’द्दा हा’ल्नु भनेर मेरो दाइलाई उ’क्साए ।
मलाई भने मु’द्दा हा’ल्न मन नै थिएन तर दाइले ज’व’र’ज’स्ती गरेपछि मैले गएर आफ्नो बच्चाको बाउवि’रुद्ध मु’द्दा हा’ल्न बा’ध्य भए ,’उनले भनिन्। मु’द्दा हा’ल्नेबित्तिकै उनको बच्चाको बुवा रहेका भिनाजु जे’लमा पर्छन् भन्ने पनि आफूले नबुझेको उनी बताउँछिन्।
‘छरछिमेक र गाउँले सबै टाढा भए। त जस्तो बि’ग्रेको केटी हाम्रो घर नआउनु हामी पनि आउँदैनौ भन्छन्। त्यति मात्रै होइन मेरो आफ्नै दिदीहरूले पनि बो’लचाल र भेटघाट बन्छ गरेका छन् ,’उनले गुनासो गरिन्। यतिमा नै उनको दुःखको भेल रोकिएन।
‘यो कुरा बाहिर आएपछि बुवा दुखी त हुनुहुन्थ्यो तर पनि बुवाले दुईजना छोरीहरू मिलेर बस भन्नु भएको थियो। तर दाइले मान्नु भएन र मुद्दा हालेपछि भिनाजु जेल पर्नुभयो। भिनाजु जे’लमा परेपछि छोरीको जिन्दगी ब’र्बा’द भयो भनेर बुवाले वि’ष से’व’न गरेर आ’त्म’ह’त्या गर्नुभयो,’उनले भनिन्।
Prevरोशी खोलाले बगाउँदा आठ वर्षीय बालकको मृ’त्यु.
Nextबिबाह गरेको ४ महिना मै पति र सासुको या’तना सहन नसकेर प्रीतिले वी”ष पिइन् (भिडियो सहित)
आयाे खुसिकाे खवर पेट्राेल ४५ रूपैयामा झर्ने सम्भावना
प्रचण्ड बने द’ लको नेता, प्र’ मुख सचेतकमा देव गुरुङ
शिक्षामन्त्री पोख्रेल राजीनामा दिने तयारीमा
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (259)